Filtrer les éléments par date : mercredi, 19 janvier 2022
Mihevitra ny hamadika ilay tsena misy rihana miorina etsy Behoririka ho toeram-pivarotana hani-masaka toy ny Zaimaika etsy Ambodifilao ny mpitantana ny Tanànan’Antananarivo. Miaiky ireto farany fa tsy nahomby io tetikasa iray noheverina hanadiovana ny mpivarotra amoron-dalana io.
Ireo mpivarotra amoron-dalana teny amin’ny manodidina an’i Behoririka iny no nentanina hiditra tao, saingy tsy naharesy an’ireto farany izany ka nanaovan’izy ireo tsidi-pahitra, avy eo niverina nivoaka tsikelikely teo ivelany, manao fangalam-piery amin’ny fiaraben’ny Kaominina isan’andro ireo mpivarotra tao anatiny, hany ka nangadihady tsikelikely ilay toerana.
Nivoaka ny resaka nanomboka ny herinandro lasa iny, na tsy mbola ofisialy aza, fa aleo hatao ho toeram-pivarotana hani-masaka (Food Court) toy ny Zaimaika io fotodrafitrasa io. Efa nisy mihitsy aza moa ny fiantsoana ireo sasantsany ao amin’ny Kaominina izay vonona ho amin’izany fandraharahana izany.
mercredi, 19 janvier 2022 15:34
Andry Rajoelina : Telo taona katroka androany ny nanaovany fihanianana nandraisany fahefana feno
19 Janoary 2019 - 19 Janoary 2022, feno telo taona katroka androany ny nanaovany fihanianana teo Mahamasina Antananarivo, ka nandraisany fahefana feno amin’ny maha filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara, voafidy azy.
Famokarana zava-pisotro : Mpandraharaha iray notorian’ny fanjakana any amin’ny Fitsarana
Mpandraha iray tsy manara-dàlana amin'ny famokarana zava-pisotro no notorian’ny fanjakana amin’ny alalan’ny Minisiteran'ny Fampiroboroboana ny Indostria sy ny Varotra ary ny Fanjifana (MICC) eny amin’ny Fitsarana.
Nisy mpanara-maso ny varotra, mpiasa eo anivon’ity ministera ity ihany koa notorian’ny MICC noho ny fiahiahiana kolikoly mifandringotra amin’io raharaha io.
Hentitra ny Minisitra Edgard Razafindravahy nanamafy fa mitohy ny asa fanadiovana sy ady amin'ny kolikoly ataon’ny ministera tantanany.
Efa nanomboka tany amin'ny fanadiovana eo amin'ny fahazoana fankatoavana hanondrana lavanila izany, nitohy tamin’ny seha-pihariana jirofo, dinihina ihany koa ny voanjo sns.
mercredi, 19 janvier 2022 15:09
Tsena sy fanjifana : Ho avy any DIANA ny Vary Tsinjo 400 taonina
Manatsara amin'ny fahefa-mividin' ny mponina ny fisian'ny Vary tsinjo eny an-tsena. Hisy vary 400 taonina hamatsiana ny Faritra DIANA amin'ny vidiny 600 Ariary ny kapoaka amin’ity herinandro ity, taorian’ny 500 taonina efa notsinjaraina ho an’ny mponina Ambilobe sy Antsiranana, izay samy hahazo 250 taonina avy.
Araka ny loharanom-baovao dia misy fitoniana miohatra amin'ny maitso ahitra tany aloha ny vidim-bary eny an-tsena.
Ampy hamatsiana ny filàn’ny mponina ny voka-bary eto Madagasikara, fa natao hitsinjovana ny fahefamividin’ny maro, ary koa hitazomana ny vidim-bary tsy hidangana loatra kosa ny Vary tsinjo afaran’ny orinasa State Procurement of Madagascar na SPM.
mercredi, 19 janvier 2022 14:46
Fanokafana ny taompambolen-kazo : Tsy niazo an'i Mahanoro ny filoha Andry Rajoelina
Namoaka fampitam-baovao ny teo anivon’ny Fiadidiana ny Repoblika androany maraina, fa tsy hiazo an’i Mahanoro ny filoham-pirenena Andry Rajoelina, androany Alarobia 19 janoary 2022, tokony hanatrika ny fanokafana ny taom-pambolenkazo, ny antony dia ho firaisam-po amin’ireo traboina vokatry ny rotsak’orana betsaka tao anatin’ny roa andro nisesy.
Tsy hisy ihany koa ny fambolen-kazo nokasaina hotanterahina eny amin’ny Lapam-panjakana Iavoloha androany.
Etsy ankilany dia hisy fivoriana hotarihin’ny filoha anio, miaraka amin’ireo tompon’andraiki-panjakana hijerena vahaolana sy fepetra manolona ny fiakaran’ny rano eto Antananarivo Renivohitra.
Nahitana fihotsahan-tany teo ambanin’ny toby famorakarana herinaratra any Marozevo, amin’iny lalam-pirenena faha-2 mankany Toamasina iny ny alatsinainy 17 janoary 2022.
Voairaka, noho izany, ny orinasa sinoa CGC mba hanala ny ranontany niangona teny an-tsisin-dalana.
Vokatr’izay dia tapaka nandritra ny ora iray teo ho eo ny alatsinainy hariva ny fifamoivoizana tamin’iny lalam-pirenena faha-2 iny.
Miandraikitra ny asa fanaovan-tara ny ampahany voalohany amin’ny lalam-pirenena faha-44 Marovoay Gara (MLA)-Amboasary Gara (MLA), 40 km, ny orinasa CGC, no sady misahana ny fikojakojana ny RN2 ihany koa.
mercredi, 19 janvier 2022 14:16
Lalana Antsofonondry - Tsarasaotra : Nakatona tsy azo ifamezivezen’ny fiara
Nakatona tsy azo ifamezivezen’ny fiara manomboka androany alarobia 19 janoary 2022 ny lalana rarivato, mirefy 5km eo, mampifandray an’i Tsarasaotra amin’Antsofonondry.
Ho fiarovana ny fotodrafitrasa noho ny rotsak’orana nisesy miteraka fahalemen’ny fefiloha no antony nandraisan’ny ministeran’ny Asa vaventy ny fanapahan-kevitra.
mercredi, 19 janvier 2022 14:04
Tonelina Ambohijatovo : Nakatona vonjimaika
Nakatona vonjimaika ny tonelina Ambohijatovo androany 19 janoary, tamin’ny 1 ora sy sasany ka hatramin’ny 2 ora tolakandro, noho ny antony ara-teknika, araka ny fampahafantarana nataon'ny avy eo anivon'ny Fiadidiana ny Tanànan'Antananarivo Renivohitra.
mercredi, 19 janvier 2022 14:02
Fikambanana Aigny Araiky : Fizarana kits scolaires tao amin'ny EPP Mahavelona Sainte Marie
Mitohy hatrany ny asa sosialy ataon'ny Fikambanana Aigny Araiky, miaraka amin'i IMBIKI Herilaza, Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, tao Sainte Marie, ka ireo mpianatra ao amin'ny EPP Mahavelona Sainte Marie no nisitraka ny kits scolaires.
mercredi, 19 janvier 2022 12:13
Tantely : Mifampiankina betsaka amin'ny zava-maniry
Hita tokoa ny fiovan'ny zava-maniry, na ny felany, na ny voany ho an'ireo voankazo vao nampidirina ny tantely.
Biby anisan'ny ela indrindra taonjato maro ny tantely, ary mila ny zava-maniry izy vao velona, ireo zava-maniry ihany koa mila azy amin'ny ampahany betsaka, hanatontosa ny famokarany voa (pollinisation).
Raha ny fanazavan'ireo manam-pahaizana momba ny zava-maniry, dia mamoaka fofona hisarihana ny tantely ireo voninkazo na zava-maniry, mamelana loko marevaka mba ho jejo anantonan'ny tantely azy ireo, ahatontosa ny fampiraisana, ankoatran'ny voninkazo hafa toy ny vanille izay tsy maintsy atao tanana aloha hatreto.
Ny tantely indray dia biby miasa. Ary tena manana fandaminana entitra.
Tokana ny mpanjakavavy (Reine). Izy irery no manatody, mahatratra 2000 isan'andro, mandritra ny 4-5 taona eo. Mahatratra 500 000 zana-tantely any izany no aterany.